Byg Homesteads | Vakashela i-Hultsfred
Izwa isiko elengeziwe!
Zizwe izimpiko zomlando! Eduze kukamasipala sinamakhaya amahle namapaki asekhaya. Waphila kanjani esikhathini esedlule? Waphila kanjani? Lapha uthola ukuzwa amapulazi nezindawo kusukela ezikhathini ezidlule lapho ipulazi noma ipaki ngalinye lilandisa khona ngendaba yalo.
Ipaki lomlando wendawo likaHultsfred
Epaki elihle eliseLake Hulingen kunepaki lomlando wendawo likaHultsfred. Eduze kwaleli yipaki lamaFolkets, indawo yezemidlalo kanye namatende. Ngemuva kokwehliswa kweLake Hulingen ngo-1924 kwakukhona
Ipaki lomlando wendawo waseMålilla-Gårdveda
IMålilla Gårdveda Hembygdspark ingelinye lamapaki asekhaya amakhulu kakhulu futhi asebenza kakhulu eSweden. Imisebenzi yenzeka lapha unyaka wonke futhi ipaki ilokhu inwetshwa ngokuheha okusha. KU-IN
Ipaki lasekhaya laseVirserum
IVirserums Hembygdspark yipaki yasemakhaya eVirserum kumasipala waseHultsfred, enezakhiwo ezingaba ngu-15, kusukela ngekhulu le-1600 kuze kube ezikhathini zanamuhla. Izakhiwo ezisendaweni zisikhombisa indawo okuyo
UFröreda Storegård wangekhulu le-1700 ungomunye wamatshe esikhumbuzo aseKalmar County. Indawo eyipulazi enesakhiwo sayo esigciniwe esikhombisa ngokusobala isimilo somuzi waseSmåland wokulima kusukela ngekhulu le-1700
Ipaki endaweni ebabazekayo. Kukhona isitolo se-snus, imakethe, indlu yekhofi kanye ne-sauna yelineni nokuningi. ILönneberga Hembygdsgille yasungulwa ngo-1941. Basindisa futhi banakekela abakudala
IHembygdsgården inendawo ebabazekayo enomfudlana ovunguzayo nedamu lamanzi. Isikhungo sasekhaya senani elikhulu leVenabygden enezakhiwo eziningana zenani elikhulu
IMörlunda-Tveta Hembygdsförening yakhiwa ngo-1963 kwathi ngo-1965 kwakhiwa isakhiwo sokuqala eHembygdsområdet. Okubizwa nge- "Turkstugan" (4) okufanele ngabe yincane kakhulu